Omunye ukubukeka kwanele kuphakamisa ukuthi lokhu, omkhulu, amadoda anamandla kwemisipha ngisho ukuyibalekela enkingeni. Kodwa empeleni akunjalo. Thola okungenani into baye ngenxa yomzimba wakhe. Lesi sihloko sizodingida amafilimu mayelana sawo esiningi. Uhlu lapha ngenzansi.
1. Inkulumo ethi "Hlalani Hungry" (1976)
nomdlali wamabhayisikobho waseMelika u-Arnold Schwarzenegger - omunye bodybuilders edume kunazo zonke. Ngakho-ke, echaza movie mayelana sawo esiningi nje ekuqaleni isithombe nge iqhaza lakhe. Ukuze kuqiniswe usithonye esifundeni, iqembu elikhulu lobugebengu kuqala ukuthenga up yonke impahla kule County. Okwenziwayo kuphumelela, laze lafika ejimini, "Olympia", elibhekene nomse- Joe Santana - iqhawe lendawo sawo esiningi.
Kunokuphishekela bemidlalo i midlalo ebalulekile, ngakho akayena abanentshisekelo yokuthengisa isakhiwo. Bese kuthi-ke abaphangi waqasha insizwa, ogama njongo - ngesinyenyela kwesiyingi abasubathi zendawo Singakwati yini kusondzela Joe.
2. "Fortress" (2011)
Amafilimu mayelana sawo esiningi ngempela okuhlobene nokuqeqesha iqhaza tournaments. Denis ukuphila ageleza hhayi njengokungathi wayefuna lowo. Adult ziyabhalwa usayizi umxhwele indoda - wayohlala professional, kodwa usahlala nomama wakhe futhi baphoqeleke ukuba basebenze amahora unogada. Mhlawumbe, ngohlobo futhi ayikwazi wathi, kodwa enhliziyweni yakhe, yena uyindoda enhle ngubani amaphupho uthando olukhulu futhi emsulwa. Nokho, isinyathelo sokuqala ukuba bajwayelane intombazane ayikwazi ixazululwe.
Ngolunye usuku, ngo-iseluleko abangane, unquma ukuyisingatha ukulishiya elaseYurophu ngiye eThailand. Yiqiniso, unina amelane zakhe, kodwa umfana sasesinqumile. Phela, Thailand eziningi girls khulula futhi Denis ulindele ukubonana nomunye wabo.
3. "Generation Iron" (2013)
Isimanga siwukuthi kodwa documentary sawo esiningi isuswe okungenani zobuciko. Mhlawumbe iphrojekthi lokuqala lase isithombe "ukudonsa Iron," lapho Arnold Schwarzenegger kubonisa futhi lisitshele indlela 'ukwakha "umzimba wakho futhi wathandwa ezikulolu mncintiswano," Mnu Olympia ". Esikhathini ifilimu "Generation Iron" sikhuluma bodybuilders ngubani ukumpompa yensimbi nsuku zonke ukuze kutholakale imiphumela efanayo.
Balindeleke ukuba bakwazi ukulandela isimiso esiqinile futhi akhohlwe cishe ngokuphelele isikhathi siqu. Esikhathini Ukudla kufanele usebenzise izithasiselo ekhethekile ekhuthaza ukukhula kwemisipha. Yebo, usongela izinkinga zezempilo. Kodwa umvuzo ke - udumo, imali imiklomelo yabo kanye neticu, bona zako zinkulu.
4. "steroid: igazi nomjuluko" (2013)
Amanye ama-movie sawo esiningi esekelwe nezenzakalo zangempela. I amahlaya ubugebengu iqondiswe ngu-Michael Bay ukhuluma evamile imfanelo umqeqeshi, Daniel Lugo, abake wanquma ukuhlanganyela ukuphila esikhathini esidlule. Yena efika engqondweni umbono omuhle kakhulu indlela ukuze uthole esheshayo ocebile - zokuthumba omunye amaklayenti akhe ocebile.
Uma kwenzeka kuthatha abangane bodybuilders ezimbili - uPawulu Adrian. Ndawonye, bazobambisana vula izinhlelo futhi uqiniseka ukuthi konke kuyoba ephelele. Daniel kubonakala sengathi benza konke, kodwa esikhathini esithile, kukhona okungahambanga kahle.
Chaza amafilimu mayelana sawo esiningi ukuqedela idrama French Roshdy Zema. Antoine Morel kanye kuvuliwe ithrekhi okungalungile, futhi manje le nsizwa has yokuyikhokhela. Yena amabombo ezikweletini, ngoba lelo njalo unezinkinga. Ngakho kangangokuba, ukuthi ezigebengu olulodwa agasele ekhaya lakhe futhi walenza a pogrom. Umama ucela indodana yakhe ukuba bangenele ingqondo ukuze uthole umsebenzi futhi uqale ukuphila okuvamile.
UMfoweth 'inikeza kuye enye indlela. Vakashela bodybuilders uyise, ngubani engazange akubone iminyaka emihlanu. Manje uzama uzigcine okwaziyo futhi njalo wenza at imincintiswano. Okokuqala, u-Antoine enqaba ukunikezwa, kodwa ke enquma ukuya. Mhlawumbe leli yithuba ukuqala entsha eyodwa ukuphila. Phela, uyise ayinikeze hhayi kuphela umsebenzi, kodwa futhi isipiliyoni zokuxazulula izinkinga.
Kirill Serebrennikov: komsebenzi nokuphila siqu
"Leon" abadlali. Izibuyekezo nezilinganiso movie
Umlingisikazi Victoria Weerberg: Biography of inkosikazi yokuqala Maksima Vitorgana
Burrata - kuyini? Olunye uhlobo ushizi Italy
Ukucatshangelwa - ke ... Umkhuba ukucatshangelwa. Igama elithi "ecabanga"
Ishaja Solar: izici lobuchwepheshe, injongo
"Gialurom": Izimpendulo iziguli mayelana izidakamizwa
U-Andrey Zhitinkin: biography kanye nobuciko